Linux 5.13 Inosvika neKutanga Rutsigiro rweApple M1, Kuvandudza Kwevatyairi uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi miviri yekuvandudza, Linus Torvalds yakaburitsa Linux kernel 5.13 kuburitswa iyo inoonekwa seyakanyanya vhezheni munhoroondo, sezvo yakagamuchira 17189 kururamisa kubva kune vanogadzira 2150 uye neshanduko idzo dzakabata mafaira 12996 794705, mitsara 399590 XNUMX yekodhi yakawedzerwa, mitsara XNUMX yakabviswa
Pakati pekuchinja kwakakurumbira Pakutanga rutsigiro rweApple M1 machipisi akajekeswa, cgroup "misc" mutyairi, akamira kutsigirwa kwe / dev / kmem, tsigiro yeIntel itsva uye AMD GPUsla kugona kudana zvakananga kernel mabasa kubva kuBPF zvirongwa, kernel stack randomization yeese system yekufona, kugona kuvaka muClang neCFI (Kudzora Kuyerera Kuvimbika) kudzivirirwa, LSM module Landlock yeimwe yekuwedzera maitiro kupwanya, uye zvimwe.
1 Main nyowani maficha eLinux 5.13
Main nyowani maficha eLinux 5.13
Mune iyi vhezheni itsva yeKernel se inosimbisa kuiswa kwekutanga rutsigiro rweApple's ARM M1 chip, iyo inovhara mashandiro ekuvhiringidza controller, timer, UART, SMP, I / O uye MMIO. Izvo zvinotaurwa kuti iyo GPU inodzosera mainjiniya haisati yakwana izvozvi, serial console uye furemu yebuffer rutsigiro rwunopihwa kuronga zvabuda.
Chimwe chiitiko chinoratidzika kuenderera mberi kubatanidzwa muMPTCP kernel (MultiPath TCP), sezvo iyo nyowani vhezheni ichiwedzera kutsigira kwesockopt kugadzirisa generic TCP sarudzo. Iko kugona kwekusetazve yega mafashama akaitwa.
Zvakare zvinomira kunze a itsva "Zvimwe" mutyairi weboka (CONFIG_CGROUP_MISC), Yakagadzirirwa kudzikamisa uye kuteedzera scalar zviwanikwa zvinogona kudzorwa uchishandisa yakapusa uye isina kukwana kadhi kumisikidza yakanyanya kubvumidzwa tsika. Semuenzaniso, manejimendi edhiresi nzvimbo kadhi anoshandiswa mu AMD SEV (Yakachengeteka Yakavharidzirwa Virtualization) michina inotaurwa.
Kune rimwe divi, zvinoratidzwawo izvo muBPF yekutsvaga zvirongwa, zvakave nyore kushandisa yemuno kuchengetedza de mabasa ebasa, iro rinopa mashandiro akanaka kana uchisunga dhata kune yakatarwa BPF inobata.
Uye zvakare, zvinojekeswa izvo mushure memakore gumi nematatu mubazi rekugadzirira, mutongi «comedi» ( muunganidzwa wevatongi yemhando dzakasiyana dzemabhodhi ekuwana dhata. Madhiraivha anoitwa seLinux kernel module inopa zvakajairika mashandiro uye munhu akaderera-chikamu chevatyairi module) akadzikama uye ndokuenda kune mainframe kutsigira iyo yekuunganidza data zvishandiso.
En ext4, zvinyorwa zvinyorwa zvino zvinobvumirwa kunyorwa kana mafaira abviswa kuona kuti akadzimwa mazita mazita akadzimwa. Nekutanga kurodha block bitmaps, kodhi kuita kwe block mepu mune ichangounganidzwa FSs yakagadziridzwa. Ext4 zvakare inobvumidza iyo imwecheteyo yekushandisa kunyorera uye kesi-isinganzwisise maitiro.
Nguva yeXFS kugona kubvisa nzvimbo kubva kuboka rekupedzisira rekuparadzira pane faira system yakawedzerwa, yaive yekutanga yekubatanidza mukuita basa rekudzora saizi yezvikamu zviripo neXFS FS. Mhando dzakasiyana dzekuita optimizations dzakaitwa.
MuBtrfs iko kushandiswa kwekuverenga pamberi kwawedzerwa mune rekutumira rairo, iyo yakadzora iyo nguva yekutumira zvizere ne10% uye imwe yekuwedzera ne25%. Zvema block block zvishandiso, otomatiki kumashure kugoverwa kwenzvimbo kunopihwa kana iyo 75% isina kushandiswa nzvimbo chikumbaridzo chakapfuura.
Tsigiro yeiyo / dev / kmem yakakosha faira yabviswa, iyo inogona kushandiswa kuwana iyo yese kernel kero nzvimbo. Iyi faira yakawanikwa isiri yechinyakare uye ichikonzera nyaya dzekuchengetedza.
Tinogona zvakare kuwana mune iyi nyowani vhezheni yeLinux 5.13 iyo akawedzera rutsigiro rwekuvaka kernel pamwe nekubatanidzwa kweiyo CFI yekudzivirira michina (Chengetedza Kuyerera Kuvimbika) mune iyo Clang compiler, iyo wedzera cheki inoshanda pamberi pega zvisina kufanira kufona kuti uone mamwe mafomu eisina kujekeswa maitiro izvo zvinogona kutungamira mukutyora kweyakajairika kuyerera kudzora semhedzisiro yekushandisa, kugadzirisa zvinongedzo kumabasa akachengetwa mundangariro. Iyo CONFIG_CFI_CLANG paramende inokurudzirwa kugonesa CFI.
Pakupedzisira pachikamu chevatyairi, ikozvino yeGUD (Generic USB Ratidza) mutyairi anopa DRM (Direct Rendering Manager) zvivakwa zvekutenderera kwemifananidzo, kupenya kudzora, EDID kuwana, vhidhiyo modhi yekumisikidza uye TV kubatanidza, ayo ari iwo anogona kushandiswa se hwaro hwekugadzira michina-yakanangana nemadhiraivha.
Nguva yeamdgpu yakawedzera rutsigiro rwekutanga rweGPU Aldebaran (gfx90a) uye Pakutanga rutsigiro rweFreeSync Adaptive Sync yeHDMI inosanganisirwa (yaimbowanikwa yeDisplayPort),
Nguva yevatongi veIntel zvinoratidzwa kuti mutungamiriri mutsva wekutonhodza manejimendi waitwa, iyo inobvumidza kudzikisa kuwanda kweprosesa kana paine njodzi yekupisa.
Kune avo vanofarira vhezheni itsva Linux 5.13 vanogona kurodha pasi izvozvi kubva ku kernel.org
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Linux 5.13 inosvika nerutsigiro rwekutanga rweApple M1, kunatsiridza mutyairi uye zvimwe